सानो चोट भने लाग्यो दुख लाग्नु स्वभाविक हो : कोमल वली - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२०७४ कार्तिक २४ शुक्रवार | Gufgaf
काठमाण्डौ कार्तिक २४ ✎
यति बेला कहाँ हुनुुहुन्छ?
म दाङ्गमा छु ।
चुनावको प्रचार प्रसारको लागि हो कि घरायसी कामको लागि?
म चुनावी प्रचार प्रसारको लागि यहाँ आएको हो ।
निर्वाचन कत्तिको लागि रहेको छ?
हिजोबाट अलिकति माहोल तातिन थालेको छ । चुनावको लागि अब जनतामा पनि अलि चासो हुन थालेको छ । आज भोली धान काट्ने पनि प्रक्रिया चलिरहेको छ । दाङ्गमा त धान खेती राम्रो हुने ठाँउ हो । खेत खेतमा पनि धानको बालाहरु स्याहार्दै हुनुहुन्छ भने निर्वाचनमा पनि ध्यान दिन शुरु गर्दै हुनुहुन्छ ।
कोमल वलीलाई एमाले पार्टीले धोका दियो भन्ने पनि चर्चा भयो तपाईलाई त्यस्तो लागेको छ कि छैन?
अब केही न केही दुख लाग्नु स्वभाविक नै हो किनभने मान्छेलाई एउटा आशा देखाएपछि यसमा सानो चोट भने लाग्यो ।
तपाईलाई पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै ल अगाडी बढ् म छु भनेर नै तपाई पार्टी प्रवेश गर्नुभएको तर अन्त्यमा कसरी धोका भयो?
सायद पार्टीमा केही कुराहरु भए होलान धेरै छलफलहरु भयो मेरो टिकटको बारेमा त्यही कारणले गर्दा त्यहाँ केही कुरा मिलेन होला । म दाङ्ग आई सकेको थिए त्यहीकारण यो बिचमा के के भयो भनेर थाहा पाउन सकिन किनभने म सम्पर्कबाट टाढा थिए ।
कोमल वलीलाई दाङ्गमा स्थापित गरियो भने यो भन्दा अघि स्थापित भएका शिर्ष नेताहरुलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यसले गर्दा अहिले नै व्याक राख्नसकियो भने आफ्नो स्थान सुरक्षित हुन्छ भन्ने खालको कुराको पनि चलखेल भयो भन्ने पनि छ नि?
त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । दाङ्गबाट क्षेत्र नम्बर तीनबाट मेरो प्रत्यक्ष रुपमा नै मलाई सिफरिस गर्नुभएको हो त्यहाँको नेताहरुले । त्यस कारणले गर्दा नै उहाँहरुले वास्तवमा राजनीतीमा महिलाहरुले त्यति स्थान पाएका पनि छैनन । महिलालाई राजनीतीमा अघि लिएर आउनुपर्छ भन्ने सोंच हो सबै दलहरुको । तर, पनि कहाँ के ताल मेल मिलिरहेको छैन । त्यसकारण म यस पटक राजनीतीमा त छु नै प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन प्रणालीमा उमेदवारको रुपमा प्रस्तुत हुन सकिन ।
तपाईले उमेदवारी दर्ता गर्नुभयो तर पछि फिर्ता लिनुभयो । आवेगमा दर्ता गर्नुभएको थियो र सम्वादमा फिर्ता लिनुभयो कि के भयो?
(हासोँ ) आवेग त आवेग मै भन्नु पर्यो किनभने मैले पन्ध्र गते दिउँसो मात्र थाहा पाए । रात भर हामीले सर सल्लाह गर्यौ किन भने हामीले धेरै नै तयारी गरिसकेका थियौ । बिहान मात्र हामीले चुनाव नै लड्ने भनेर निधो गर्यौ । तर दाङ्गमा नै बस्नुपर्छ साथीभाईहरु आफ्नो आफन्त र शुभेच्छुक र नातागोता सबै यही हुनुहुन्छ । चाहे जुन सुकै राजनीतिक दलमा भए पनि दाङ्ग भने मेरो पारिवारिक जिल्ला हो । त्यस कारण सबैको चाहाना र परिवारको अनुरोधलाई मैले नकार्न सकिन । पछि मैले संवादमा झिकेँ ।
ज्ति उत्साहित पार्टी प्रवेश गर्दा हुनुहुन्थ्यो त्यो खालको उत्साह कायम छ किअलिकति आत्मबलमा चोट पुगेको छ ?यो राजनीती मेरो बसकोरहिनछ भन्ने खालको भएको छ कि छैन?
त्यस्तो केही पनि भएको छैन किनभने म चुनावमा पो उमेद्धवार हुन पाईन । अरु त मेरो उर्जामा कमी आउने गरेर त्यस्तो चाहि भएको छैन । देश बनाउने कुरा हो । देशलाई समृद्धि तर्फ अघि बढाउने कुरा हो । हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने कुरा हो । यसमा हरेक नेपालीको साथ सहयोग र उर्जाको निकै आवश्यकता छ भने म त झन प्रत्यक्ष रुपमा राजनीति गर्छु जनताको सेवा गर्छु भनेर यसरी राजनीतिमा आईसकेपछि मेरो उर्जामा कमी आयो भने त कसरी मुलुकलाई हामी समृद्ध बनाउन सक्छौ त । कुनै कमी आएको छैन बरु मेरो उर्जा अझै थपिएको छ ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा लागेर नेता हरुले नकमाएको नाम तपाईले कमाउनु भएको थियो । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तपाईको नाम थियो । संग सगै तपाईको राम्रो खालको जागिर पनि थियो त्यो सबै छोडेर तपाई राजनितिमा आउनु भयो । कतै गल्ती गर्दै छु कि भोली मलाई पार्टीले पनि राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्दिन्न कि भन्ने आशङ्का छ कि छैन तपाई लाई?
सांगीतिक क्षेत्रमा पनि मान सम्मान, माया र श्रद्धा पाए सबैको । यो मेरो लागि जीवनमा पाएको ठूलो उपलब्धि हो । म सन्तुष्ट छु । पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि मैले राम्रो रुपमा राष्ट्रको सेवा गरेको थिए । सबैको साथ नै मेरो बल र उर्जा थियो । यसैले गर्दा म राजनीतिमा लागेको हो किनभने म फलानो हो भनेर मैले गाँऊ गाँऊमा चिनाउनु पर्दैन । मलाई सबैले चिन्नु भएको छ । यो मैले सकारात्मक कुरालाई पनि राजनितिक रुपमा उपयोग गर्न सक्छु र सफलता हासिल गर्छु भन्ने नै छ । त्यसैले यी मेरा राम्रा हतियारहरु बाहेक अरु केही छैन म संग । तर, यो राजनीतिमा आएर पनि दुख चाहि लागेको छैन किनभने यो क्षेत्र भनेको मुलुकको सेवा गर्ने माध्यम हो । यसले जहिले पनि देशको सेवा गर्न अवसर दिन्छ । यसमा चुनौतीको साथै अवसर पनि छ । यो अवसर हतपत सबैलाई प्राप्त हुन सक्दैन । मलाई प्राप्त भएको छ । यो अवसरलाई मैले सहि रुपमा सदुपयोग र उपयोग गर्न सक्नुपर्छ भनेर सोची रहेको छु । यी नै पक्ष मेरो जीवनमा गर्व गर्न लायक मेरो गहनाहरु हुन ।
लामो समय राप्रपाको शुभेक्छुक भएर रहनु भयो । त्यसपछि औपचारिक रुपमा राप्रपामा प्रवेश गरेर केन्द्रिय सदस्य हुनुभयोलोकप्रिय मत सहित । त्यति राम्रो मत प्राप्त गरेको ठाँउलाई च्वाट्ट छोड्ने अवस्था चाहि कसरी आएको हो?
यसमा धेरै कुराहरु छन । मैले धेरै भोट पाए प्रतिनिधीहरु बाट । तर त्यही अनुसारको अरु काम गर्ने मौका मैले नपाएको हो कि जस्तो मलाई महसुस भयो किनभने नेतृत्व वर्ग त्यति स्थिर थिएन । त्यसैले यो पार्टी र राजनीतिमा लिडरसिपले ठूलो भूमिका खेल्छ । त्यसको जनाधारले पनि भूमिका खेल्छ । सबै कुरा राप्रपामा नराम्रो होईन राम्रो थियो । सबै पार्टीले राम्रो गर्यो भने मात्र मुलुक राम्रो हुने हो । त्यसैले पार्टी भित्रको आन्तरिक र प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुध्रिन र अनुशासित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । व्यक्तिवादी राजननीति गर्दा मुलुकलाई असर परिरहेको छ । मैले चाहि सबै कुरा राजनीति गर्न भनेर जागिर छोडे । दाङ्गमा मलाई चुनाव लड्ने ठूलो ईच्छा थियो । त्यो बीचमा एमाले संग मैले दाङ्गमा एमालेले सहयोग गर्छ भने म राप्रपाबाट नै उठ्छु भन्न गएको थिए । तर, यसरी कुरा कता मोडियो । नेकपा एमालेले मलाई अवसर दियो । त्यसले गर्दा एमालेमा प्रवेश गरेर सेवा गर्दै छु ।
शसस्त्र द्धन्द्धका बेलामा तपाईको घर परिवारलाई विस्थापित गर्ने पार्टी संग एमालेले सहकार्य गरेको छ चित्त दुख्दैन?
अवश्यपनि । त्यो बेलामा द्धन्द्धको काल थियो । एउटा समूह देशमा क्रान्ति गरेर परिवर्तन चाहन्थ्यो । वास्तवमा उनीहरुलाई महसुस पनि भयो पछि कि हामीले सामान्य परिवारको मान्छेलाई त्यस्तो गर्नु हुदैन्थ्यो । धेरै लामो सङ्घर्ष पछि हाम्रो घर जग्गाहरु फिर्ता गरिदिनु भयो । त्यसैले गर्दा त्यो पीडा त छ नै । तर अब म पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि एमाले र नेकपा माओवादी संग एकिकरणको कुरा आयो र उहाँहरु एउटै मन्चमा बसेर पार्टी एकिकरणको कुरालाई अगाडी लिएर अहिले चुनावमाउ हाँहरु संयुक्त रुपमा गईसक्नु भएको छ । त्यो कारणले गर्दा राजनीतिमा भन्निछ नि कसैको कोही स्थायी शत्रु वा मित्र हुदैन । म अब यो पार्टीमा आवद्ध भईसकेँ । त्यसकारणले मेरो नेतृत्वले अर्को नेतृत्वलाई पनि सम्मान गरेर काँधमा काँधजोडेर अघि बढिरहेको छ त्यसैले म पनि अघि बढिरहेको छु ।
यदि यही चुनावमा कमल थापाजी आएर लौन कोमलजी मलाई सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभयो भने तपाई पार्टी त्याग गरेपनि भोट चाहि हामीलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो भने तपाईको जवाफ के हुन्छ?
(हासोँ) भोट माग्नु भयो भने त्यो उहाँको अधिकार हो । किन हामी राम्रो नै बोल्छौ । मैले अस्ति पनि उहाँ संग कुरा गरेको थिए । उहाँले उमेदवारी दिईसके पछि पनि चासो देखाउनु भएको थियो । त्यस कारणले गर्दा खेरी भोट नमाग्ने हाम्रो सहजता सबै खत्तम भयो भन्ने चाहि छैन । केपी ओलीको सरकारको बेलाको उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ । त्यसकारणले अहिले पनि एमालेले चुनावी तालमेल पनि गरेको छ कतै कतै । उहाँहरुले सबै पार्टी संग भोट माग्नुहुन्छ । दिने नदिने त मेरो कुरा हो ।
चुनावी आमसभामा तपाईले गीत गाएर नै भोट माग्ने गर्नुभएको छ कि भाषण गरेर?
(लामो हासोँ) त्यो त अब म गायिका भएको कारणले सबै जनाले एउटा गीत सुनाईदिनु न भन्नुहुन्छ । त्यो स्वभाविक हो किनभने उहाँहरुले गायिकाको रुपमा हेर्नुभएको छ । तर, मेरो आवाज कस्तो छ त भनेर प्रत्यक्ष रुपमा सुन्न चाहानेहरुलाई मैले त्यसरी नजिक बसेर आवाज सुनाउन पाउनु मेरो लागि पनि सौभाग्य हो भन्ने ठान्छु । त्यस कारण म सानो एक लाईन गीत पनि गाउने गर्छु ।
अलग अलग भए नायिका रेखा थापा र गायिका कोमल वली
कोमलले स्वीकारिन् पशुपतिको सुझाव, तिहारपछि खुलेरै राजनितिमा लाग्ने
काठमाण्डौ असोज १६ सुन्दरताको पारखीहरुको सर्बाधिक रोजाईमा परेको छ रश्मिलाज फेसियल हाउस । यो नेपालको अत्याधुनिक सुबिधा सम्पन्न तथा आधुनि..